Magac bixinta caruurta iyo waqtiga. | Somaliska
Caruurta ku dhalata dalka Iswiidhan ayay waajib tahay in 3 bilood gudahood magacooda lagu soo diiwaan galiyo, ayadoo haddii ay waalidku awoodi waayaan in ay magaca diiwaan galiyaan waqtigaas la ganaaxi karo. Sida ka dhacday magaalada Nässjö waalidiin Iswiidhish ah ayaa la ganaaxay 6 kun oo karoon ka dib markii ay la dib dheceen mudo 16 bilood ah in ay ilmahooda magaca u soo diiwaan galiyaan. "Haddii waalidku ay ku fashilmaan in ay magaca u soo diiwaan galiyaan ilmahooda, hay'ada canshuuraha (Skatteverket) way xasuusineysaa waajibaadkooda" ayay warbixin ku tiri Skatteverket. "Qofkii ku fashilma in uu raaco sharciga waa la ganaaxayaa. magaca diiwan galintiisa waa in uu saxiixaa waalidka" ayay intaas ku dartay. Diiwaan galinta ilmaha iyo dadka ayaa waxaa ku shaqo leh Hay'ada Canshuuraha Iswiidhan (Skatteverket).
Caruurta ku dhalata dalka Iswiidhan ayay waajib tahay in 3 bilood gudahood magacooda lagu soo diiwaan galiyo, ayadoo haddii ay waalidku awoodi waayaan in ay magaca diiwaan galiyaan waqtigaas la ganaaxi karo.
Sida ka dhacday magaalada Nässjö waalidiin Iswiidhish ah ayaa la ganaaxay 6 kun oo karoon ka dib markii ay la dib dheceen mudo 16 bilood ah in ay ilmahooda magaca u soo diiwaan galiyaan.
“Haddii waalidku ay ku fashilmaan in ay magaca u soo diiwaan galiyaan ilmahooda, hay’ada canshuuraha (Skatteverket) way xasuusineysaa waajibaadkooda” ayay warbixin ku tiri Skatteverket.
“Qofkii ku fashilma in uu raaco sharciga waa la ganaaxayaa. magaca diiwan galintiisa waa in uu saxiixaa waalidka” ayay intaas ku dartay.
Diiwaan galinta ilmaha iyo dadka ayaa waxaa ku shaqo leh Hay’ada Canshuuraha Iswiidhan (Skatteverket).